မစပ်စု| February 23, 2013 | Hits:14,501
| | ချင်းပြည်နယ်အတွင်း သွားရောက်လှည့်လည်စဉ် ချင်းတိုင်းရင်းသား ရိုးရာဖက်ရှင်နှင့် မြင်တွေ့ရသည့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် (ဓာတ်ပုံ – president-office.gov.mm)
ဌေးဝင်း February 23, 2013 - 12:23 pm ချင်းပြည်နယ် ဖလမ်းမြို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်လိန်းက “အခုလို သမ္မတကြီးအနေနဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသားဝတ်စုံကို ၀တ်ဆင်လို့ ချင်းပြည်နယ်တခွင် လှည့်လည်ခဲ့တာကျနော်တို့ ချင်း အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ အရမ်း ဂုဏ်ယူပါတယ်တဲ့”…ကျွန်တော်လဲဂုဏ်ယူပါတယ်။…ဒါပေမဲ့ လက်အုပ်ချီပြီ..ကြိုဆိုတာကတော့..ချင်းအမျိုးသားတွေ၇ဲ့ဓလေ့ထုံးစံလား..မသိလို့မေးတာနော်။
Reply Falam Thu February 23, 2013 - 2:25 pm Uncle?Htay Win,Have you ever been to other country?If yes,do you have any foreinger friends?And, do you have any MM Tineyinthar friends in Myanmar?Do you know how people should respect to other cultures?
Reply ဗမာ February 24, 2013 - 12:19 pm မှန်ပါတယ်ဗျာ။ မိမိရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအရဆိုရင်တော့ပြောစရာမရှိပေမဲ့ အခြားအကြောင်းတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ဦးသိန်းစိန်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ဒေါ်စုကိုသော်လည်းကောင်းလက်အုပ်ချီစရာမလိုပါ။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိုးကွယ်စရာပုဂ္ဂိုလ် (ဥပမာ..သံဃာတော်) မဟုတ်လို့ပါပဲ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အရင်စစ်အစိုးရရဲ့ အမွေအနှစ်ဆိုးတွေကိုဆက်ထိန်းသလိုဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပါ။
Reply Falam Thu February 25, 2013 - 4:04 pm So,You prefer Bamar flat in their hand?This is all about dress.All of your old guys have to change old thinking.Can you tell me…what worng with this?
Reply အောင်ကြူး February 23, 2013 - 2:18 pm နာဂရိုးရာ ဝတ်စုံနဲ့ဆို တို့သမဒဂျီး ရေရေလည်လည် ဂွမ်းမှာဗျ..။ အခုပုံကတော့ မြိုင်ရာဇာ တွတ်ပီနဲ့ ဆင်သလိုဗဲ…။ ဒါမှ ဒို့သမဒဂျီး ကတွတ်ပီ..ကွ.. ဟေး…။
Reply ko khine February 24, 2013 - 10:42 am နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ချင်းပြည်နယ်ခရီးစဉ် အတွင်း ချင်းလူမျိုးများ၏ ရိုးရာဝတ်ဆုံများအား နေရာဒေသ အလိုက် ၀တ်ဆင်တာတွေ့ ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ချင်းတိုင်းသားတယောက်အနေနဲ့ ။ ၄င်း ရိုးရာအ၀တ်အစား များ ၀တ်ဆင်သလို ချင်းလူမျိုးများနှင့်ချင်းပြည်နယ်အားနေရာဒေသ အလိုက် တပြေးညီ ကူညီ ပံ့ပိုးနိုင်မည်လို့ ယုံကြည် ပါတယ် ။ နောက်တခု ထူးရှားတာက ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကိုယ်တိုင် လိုက်ပါလာတဲ့အတွက် များစွာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ် ။ သမ္ဓတမှ အစ ကကကြီး အပါ မြန်မာနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်းများ သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ ။ အမေစုနှင့်လည်း လက်တွဲနိုင် ကြပါစေ။
Reply Naldah Htoo February 25, 2013 - 1:00 am ဒုက္ခ
Reply win then February 26, 2013 - 10:10 am daw su and thein sein are doing fashion competitively… very funny … now su also dont care about burmese future .. completely quiet … we can see she is justapuppet of usa and she is now same side with junta cos she wants power like thein sein and followers … no more hope for burma …. burma will be more poor .. more low economy standard and worse and worse .. no one cares.. they are just doing for their self ….. Reply Thazin February 26, 2013 - 2:49 pm I am not sure Burma will be more poor or not, as you said.But,I just worry about your living and thinking standard is from poor to become worse and worse…Try to become middle class your self first.